Exclusive video: SOLO Live Concert, Yangon on 21 May 2011 | Myanmar Celebrity Gossip & News
Exclusive video: SOLO Live Concert, Yangon on 21 May 2011
This is the video of “SOLO LIVE” Rock, Hip Hop and Fashion Festival which was held on 21 May 2011 at Myaw Sin Gyun, Kan Daw Gyi Park, Yangon. Models from Stars & Models Int’l performed with sexy and hot Model Show and Dancing. Myanmar Singers; Ye Lay, Snare, Jouk Jack, G Family, Kyaw Htut Swe, Ar-T, Bunny Phyoe, Lwan Paing, Sandy Myint Lwin, Bobby Soxer, Mi Sandi, Wanted, Idiots, Reason and Nyan Linn Aung performed with Rock, Hip Hop and Pop Style Songs. This “SOLO Live” Concert was organised by BO BO Entertainment.
Video on Bogger!!!
thanthanMay 22, 2011 at 6:47 PMမျက်စိကတော့တော်တော်နောက်သွားတာပဲ ...အဲလောက်တောင် ဖြစ်ပျက်နေကြတာ ...အရမ်းရုပ်ဆိုးတာပဲReplyDeletedet_thaMay 22, 2011 at 7:52 PMthat grats omg girl is bigger than men (omen)ReplyDelete(♥ ‿ ♥)May 22, 2011 at 9:39 PMsandy ma ka bar mha ma shi tot tar ko hlote khar nay tar bal nawReplyDeletemmtMay 22, 2011 at 10:06 PMစန္နီမြင့်လွင် နဲ့ ၀မ်းချိုင်း ဘာတော်လဲ မသိဘူး ၊ သိရင်ဖြေပေးပါ၊ ကျွန်တော်က ဖအေတူသမီးထင်နေလို့ပါ။။ReplyDeletecareMay 22, 2011 at 10:59 PMဂီတတော့မသိဘူး...ကောင်မတွေ ကတော့ ယိုးဒယားကို မီတော့မယ်...ReplyDeleteAgyikaungMay 22, 2011 at 11:33 PMစန္ဒီမြင့်လွင်က ခြေတံအရမ်းလှတော့ လက် ၅ လုံး ဘောင်းလီဝတ်တယ်။ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က အရမ်းဖြေင့်တော့ အကျီင်္အကြပ်လေးဝတ်တယ်။ရင်သားက ဆွဲဆောင်မှု အရမ်းကောင်းတော့ တစ်ချောင်းကြိုးနဲ့ ၀တ်ပြတယ်။အားလုံးပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ ကြည့်တဲ့သူတိုင် စိတ်မချမ်းမသာမှု အပြည့်အ၀ပေးတယ်။Show တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ မြန်မာတိုင်း ဒေါးသထွက်တယ်။တော်ကြပါတော့ဗျာ...နောက်ကို စိတ်ညစ်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့...ReplyDeletelaleMay 23, 2011 at 4:22 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteမြင့်ကျော်May 23, 2011 at 4:45 AMငါလေ စိတ်တော်တော်ကို ညစ်သွားတယ် ကံကောင်းတယ် သူတို့နဲ့ ငါ မျိုးမတော်လို့ အမျိုးသာတော်ရင် ငါတော့ရှက်လို့သေပြီReplyDeletezawMay 23, 2011 at 4:53 AMစာတွေးမတွေးဘဲ နှာတွေးတွေးမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်...ဒါပေမဲ့အခုပာာက ဂီတပါနေတဲ့အတွက် အနုပညာကိုညစ်နွမ်းစေတယ်...ဂီတမပါလည်း အခုလိုလုပ်ပြမယ်ဆိုကြည့်ကြမှာပါ...ဒါကြောင့် ဂီတသမားများအတွက် ဂီတရဲ့သံစဉ်တစ်ခုကို အချဉ်းနှီးမဖြစ်စေခြင်ဘူး...ReplyDeletemasterzinb0May 23, 2011 at 7:00 AMမြန်မာအမျိုးသမီးစစ်စစ်တွေးလား?ReplyDeleteMaryMay 23, 2011 at 8:49 AMစိတ်ပျက်စရာကြီးပါလား....ဟင်းးးးးးနော်...ခေတ်ဆန်တာတော့ကောင်းပါတယ် ခေတ်မလွန်သင့်ဘူးးး...ReplyDeletetenMay 23, 2011 at 8:58 AMIn Thailand pattaya coyote. lady boyReplyDeletebyebyeMay 23, 2011 at 9:09 AMမြန်မာမိန်းကလေးတဲ့ ရှက်တောင်ရှက်သေးတယ် ခေတ်ဆန်တာမဟုတ်ဘူးခေတ်ကိုလွန်နေပြီ ဝေးဝေးရှောင်တယ်ReplyDeleteလေးချစ်တဲ့မောင်May 23, 2011 at 9:42 AMမြန်မာတွေမှ ဟုတ်ရဲ့လားကွာ သွားပါပြီReplyDelete[MM]May 23, 2011 at 11:14 AMlolzwhat wrong MM Girl?Zzzzanyway...thanks admin :)ReplyDeleteမောင်May 23, 2011 at 4:05 PMတင်ပေးတဲ့ သူကိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ မြန်မာမိန်းခလေးတွေ ဘယ်ဘ၀ရောက်နေကြပြီလဲမသိဘူး စိတ်တော်တော်ပျက်မိပါတယ်....ReplyDeleteမောင်May 23, 2011 at 4:10 PMထက်ပြောခြင်သေးတယ်ဗျာ ဂီတအစည်းအရုံးကဘာမှမပြောကြတော့ဘူးလား...ReplyDeleteDanielMay 23, 2011 at 5:33 PMI wonder about next generation girls who can recognize what the burmese traditional suite is?? what the hell is happen in our country that mostly girls want to show their body? I want to ask them is that behaviour can make u guys popular?ReplyDeletecherryMay 24, 2011 at 4:51 PMI dance better than them lollReplyDeleteYuYumonMay 24, 2011 at 6:40 PMthis isn't only their fault, its the whole society faultReplyDeleteSnow Rain-LoverMay 24, 2011 at 8:53 PMအင် တွေးမိရင်ရင်လေးတယ် မြန်မာမိန်ကလေးတွေရဲ စိတ်ဓာတ်နဲအကျင့်ကတော့ ရင်လေးတယ် အဲလိုဝတ်လို ယောက်ကျားလေးတွေ အတွက်မိုက်ပင်မယ် မိန်ကလေးအနေနဲတော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး နိုင်ငံခြာမှာဝတ်တာ သူတိုအကျင့်ဓလေ့ နဲ့ဝတ်တာ ဘာမှာမဖြစ်ပင်မယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူုး ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဝတ်တာဘာဖြစ်လဲ ကိုယ်ဟာကိုယ်ပေးတာ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတယ်စိတ်ဓာတ် နဲ့အောင်မြင်မူအတွက် ဘာမှဆို ချပေးတယ်စိတ်ဓာတ်နဲ တဏှာအားကြီးတယ် အချောင်သမားတွေနဲ ရင်လေးမိတယ် လောကမှာ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာထက် အရေးကြီးတာများ၇ှိုလိုလား? အပျိူစင်ဘ၀ထက် ပိုမတ်မော်စရာရှိလား ကိုယ်ခန္တာကို လူအရှေ့မှာ လှုပ်ပြတယ် ရဲလောက်အထိ စိတ်ဓာတ်တွေ နှိမ်နေပြီလား အောင်မြင်ကိုအဲလိုလုပ်မှာရမှား တစ်ခြာနိုင်ငံမှာတော့ အဲလိုလုပ်မှာရပင်မယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲလိုလုပ်စရာမလိုပဲရပါတယ် အဲလိုလုပ်တော့ တဏှာသမားတွေကလဲ ကဲချင်တိုင်ကဲနေတာပေါ့ အသစ်တက်တိုင် တစ်ပွဲတွေနေသလိုပဲ သံသရာ လည်နေတာပဲနောက် ဆုံးတော့ဘယ်မိန်ကလေပဲ အောင်မြင်မြင် သူလဲသူကိုယ်ပေးပြီသာကြီါ်ပါဆိုပြီ အထင်အမြင်သေးကျတော့ နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်ဂုဏ်သိက္ခာကျတာ ပဲဒါကိုဘာလိုမမြင်တာလဲ? မြင်လျှက်နဲမမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား? တကယ်မသိတာလား? အောင်မြင်မူကိုသိပ်လိုချင်လိုလား နာမည်ကြီးမူကိုလို ချင်လိုလား?ကိုယ်ဘက်က ဘာလောက်ကြီးမားတယ်ဆုံးရုံးမှူ၇လိုက် လဲကိုမသိကြဘူးလာမသိဘူး။ဘယ်မိန်ကလေးမှာ ကိုယ်ခန္တာကို မပေးဘူးဆိုရင် တဏှာသမားတွေလဲ သူဟာနဲသူငြိမ်သွားမှာပါ ပေးနေသလျှော့တွေ သူတိုယူနေအုံမှာပဲReplyDeleteဗုဒ္ဓအသံဓမ္မအောင်လံ..သာသနာ့အကျိုးဆောင်လူငယ်များအဖွဲ့May 24, 2011 at 8:56 PMသာဓု...သာဓု..သေနာမတွေReplyDeletekyileiMay 24, 2011 at 10:19 PMbad voice~low classic~shameless girlsThey act like notaMyanmar citizen.Frankly saying,both the singers and the dancers have no standard. They think they can be famous when they act like that behaviour.But we r Myanmar~~~ Feeling sorry for our Myanmar culture.ReplyDelete***KOKO & MEMEELAY***May 24, 2011 at 11:19 PMThis comment has been removed by the author.ReplyDeletedarkMay 24, 2011 at 11:21 PMအင်းမနေနိုင်တော့ ၀င်ရေးလိုက်ဦးမယ်...အသံတွေကမကောင်း...ဖင်လှုပ်ဖို့ သာ အိမ်ကတည်းကပြင်လာကြတာ... ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာဖင်လှုပ်တယ်ဆိုတာက သူ့ ဓလေ့ နဲ့ သူအရည်အချင်းနဲ့သူ့ အသံနဲ့ ဖင်လည်းလှုပ်ရင်းလှုပ်ရင်း နာမည်ကြီးတာ...ဒို့ မြန်မာများကတော့ အသံက ချာပင် ဖင်လှုပ်ဖို့ ကရှေ့ ဆုံးက ဒန့် တန့် တန့် နဲ့ နေအောင် ကိုအသံကြားတာနဲ့ ပစ်ပေးချင်နေသလားမှတ်ရတယ်... ရှာကီရာတို့ ဖင်လှုပ်တာ အသံကလည်းကောင်း ကကလည်းကတတ်... Beyonce ဖင်လှုပ်တာ အသံကလည်းရှယ်...နိုင်ငံကလည်းကျော်...တို့ မြန်မာများက အနောက်နိုင်ငံလိုလိုက်ဝတ် အသားတစ်... တစ်ခုပဲ အသံမကောင်း ဖင်လှုပ်ရောင်း...ယောကျာ်းသားများကြိုက်ကြကြောင်း..ကြည့်ရသလောက်ကတော့ စင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖင်ပြေးလှုပ်ဖို့ ပဲချောင်းနေသလားမှတ်ရတယ်...လေးစားလောက်တဲ့အရည်အချင်း...တစ်ခုမှမတွေ့ ရဘူး...ခါးနဲ့ ဖင်နဲ့ ရင်နဲ့ များပြုတ်ထွက်လွင့်စင်လို့ တစ်ပိုင်းစီများဖြစ်နေသလား မှတ်ရတယ်... တော်သေးတယ်..အဲလောက်လှုပ်ရင်းနဲ့ အကုန်ပြဲရဲမထွက်ကုန်တာ ပဲ...ထိန်းနိုင်တယ်ပြောရမယ်...အင်း...မပြောတော့ပါဘူး စိတ်ကလည်း မရဘူး....တော်တောရှည်သွားတယ်..ReplyDeletedarkMay 24, 2011 at 11:30 PMမနေနိုင်တော့ ဆက်ပြန်ပီ.... သေချာစဉ်းစားကြည့်တာ...သူတို့ ဖင်လှုပ်တာ ဘာလို့ ကြည့်မကောင်းတာတုန်း...ဖင်လှုပ်စနစ်မကျလို့ လားမသိဘူးနော်.Shakira Loca သီချင်လေးကြည့်ကြည့်စမ်းပါhttp://www.youtube.com/watch?v=YfxLgJh_Tl8ဖင်လှုပ်တာများချစ်စရာလေး...အဟိဟိ...ReplyDeletesnowMay 25, 2011 at 1:51 AMmodel အမည်ခံဖာတွေ...သူတို.လုပ်တာနဲ့ငါ့တို.မြန်မာမတွေသိက္ခာကျတယ်ReplyDeletesmnwMay 25, 2011 at 2:13 AMစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ မြန်မာမတွေမှဟုတ်သေးရဲ့လားReplyDeletesmnwMay 25, 2011 at 2:16 AMဘယ်လိုသံစဉ်နဲ့များ သီချင်းလုပ်ဆိုနေတာလဲကွာ ဟာ တော်တော်လေးကိုစိတ်ဓာတ်ကျဖို့ကောင်းလိုက်တာအဲကောင်မရဲ့မိဘဆွေမျိုးတွေက မပြောကြဘူးလားကွာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ မသိတော့ဘူးReplyDeletenoenoeMay 25, 2011 at 5:25 AMအဲလိုကပြမှ သူတိူ့ကိုသူတို့နာမည်ကြီးမယ်များမှတ်နေလားမသိဘူး စောက်ရှက်မရှိတဲ့ဟာတွေReplyDeletevenusMay 25, 2011 at 7:02 AMWhat is the song that nadi htut swe dance to?ReplyDeletedesignMay 25, 2011 at 8:53 AMThis comment has been removed byablog administrator.ReplyDeletesusandarlwinMay 25, 2011 at 9:07 AMwhat's wrong of that myanmar girls???? I ever seen before like this behavior of myanmar, very disappointment to watch this dancing and song.ReplyDeletesoe0894319203May 26, 2011 at 1:49 AMအဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ မြန်မာ နိုင်ငံ က ဒီမိုဂရေစီ နဲ့ မတန်ပါဘူး လို့ရတောင် မရသေးဘူး ဖြစ်နေလိုက် ကျတာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပြောသလို ပဲ ဖာနိုင်ငံဖြစ်တော့မယ် နဲ့ တူတယ် .................။ReplyDelete၉၉၉၉၉၉၉၉၉May 26, 2011 at 5:17 AMဒီမိုကရေစီရတိုင်းလုပ်ချင်တာလုပ်ခွင့်ရပြီလို.ပြဌာန်းမထားပါဘူး။ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသေချာနားမလည်ပဲနဲ.ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရတောင်မရသေးတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုစော်ကားရာရောက်ပါတယ်။ReplyDeletephotharMay 26, 2011 at 8:30 AMALL MAD?????????????????ReplyDeletephotharMay 26, 2011 at 8:42 AMJOUK JACK is i like'...but now he hair style is so bad"""'ReplyDeleteညMay 26, 2011 at 1:58 PMတစ်ခါကြည့်တာနဲ့ နောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်၇ဲလောက်အောင်ကို စိတ်ပျက်မိပါတယ်...ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပီလဲ မြန်မာမိန်းကလေးများ...ReplyDeletekkMay 26, 2011 at 3:43 PMmodel အမည်ခံဖာတွေ...သူတို.လုပ်တာနဲ့ငါ့တို.မြန်မာမတွေသိက္ခာကျတယ်ReplyDeletekkMay 26, 2011 at 3:44 PMOver over over ( Lady GaGa tat soe nay bar tal)ReplyDeleteVioletMay 26, 2011 at 10:50 PMJust wondering who is the dance teacher that taught them those nasty dance moves? I bet he/she really know the real meaning of entertainment and dancing? SuchaShame!ReplyDeleteထာဝရJune 2, 2011 at 1:08 AMi only like ye lay ..... :)))ReplyDeletegeniusJune 6, 2011 at 5:56 PMcomment ပေးနေတဲ့ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားရောက်နေတာတော့သေချာပါတယ်...ကိုယ်ကိုဒီလိုမဖြစ်အောင်အရင်နေကြပါ...ကိုယ့်ညီမတွေနှမတွေကိုလဲ သေချာထိန်းသိမ်းကြပါ...ဘာလို့လဲဆို တိုင်းတစ်ပါသားနဲတော့ခိုးအိပ်ကြတာမကောင်းဘူးReplyDeletemildJune 6, 2011 at 11:56 PMအပြောမခံရအောင်မီအောင်အတုခိုးပေါ့။အပြောခံလွတ်အောင်ပြုမူနေထိုင်ပါ။ReplyDeleteအာကာဖြိုးSeptember 28, 2011 at 12:31 AMသူများကိုလည်း ပြော ၊ ကိုယ့် ကိုကိုယ် လည်းပြန်ကြည့်ပေ့ါနော်လေကြီးလေကျယ်တွေ ပြော၊ ကိုယ် ကျတော့ ပာုတ်သလား ဆိုတော့ လည်း မပာုတ် ၊ အဲ့လိုတော့ မလုပ်ကျနဲ့ ၊ သူများကို ပြောထားလိုက်တာ ကိုယ့်သားသမီး ကလှည့် ကျတော့ ငါ့ သား လေး င့ါ သမီးလေး လှလိုက်တာ မလုပ်မိစေနဲ့ မပြောချင်ပေမယ့် ၀င်ရေး မိသွားတယ် ဗျာ.. :PReplyDeleteAdd commentLoad more...